သင်္ကြန်မှာ ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုစာအုပ်လေးတွေ
14 Apr 2018 . 4:10 PM
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်မှာ အိမ်တွင်းအောင်းနေတဲ့သူတွေရှိကြသလား? အခုနောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေက ဌားရခက်လာသလို ဖုန်းနဲ့လည်း စာဖတ်ဖို့က ဘယ်ကနေ PDF File တွေ ရှာရမလဲဆိုပြီး အခက်ကြုံလာပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ သင်္ကြန်လိုမျိုး နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ အကြာရှည်ဆုံးအားလပ်ရက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း စာမဖတ်ဖြစ်ပဲ အချိန်ကုန်သွားဦးမှာပါ။
အဲ့ဒီအတွက် အခုလိုသင်္ကြန်တွင်းမှာ ကိုယ့်ဖုန်း Tablet တွေနဲ့ပဲ App အသုံးပြုပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုစာအုပ်လေးတွေ ဖတ်လို့ရအောင် သုံးရမယ့် App လေးနဲ့ စာအုပ်အချို့ကို ညွှန်းပေးသွားပါမယ်။
အရင်ဆုံး သုံးရမယ့် App ကတော့ Aldiko Book Reader App ဖြစ်ပြီးတော့ iOS ရော၊ Android မှာပါ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်တဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခု App ဟာ Apple iTunes Gift Card ၊ Google Play Store Gift Card တွေ Master ၊ Visa Card တွေနဲ့ ချိတ်ထားရင် စာအုပ်တွေကို တရားဝင်ဝယ်ဖတ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုပြောသွားမယ့်စာအုပ်တွေကတော့ Public Domain Books တွေဖြစ်တဲ့အတွက် အခမဲ့ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး App ကနေ Get Gooks (Feedbooks) ကနေ Public Domain Books ကို ရွေးချယ်ပြီးတော့ အခုပြောသွားမယ့် Ebooks တွေကို Download ရယူပြီး ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်။
(၁) The Adventures of Tom Sawyer
အခုဝတ္ထုက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈၇၆ ခုနှစ်က ဝတ္ထုစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာ Mark Twain ကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Sherlock Holmes လောက်တော့မဟုတ်ပေမယ့် Tom Sawyer ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ အမှုအခင်းတွေကို ဖြေရှင်းပုံတွေက အခုစာအုပ်ကို နာမည်ကြီးစေခဲ့ပြီး နောက်ထပ် Tom Sawyer ပါဝင်တဲ့ စာအုပ် ၃ အုပ်ထပ်မနည်းထပ်ပြီး ရေးခဲ့ရတဲ့အထိ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဇတ်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) A Little Princess
Sara Crewe အမည်ရှိတဲ့ကလေးမလေးက လန်ဒန်မြို့ကြီးမှာရှိတဲ့ ဘော်ဒါကျောင်းတစ်ခုမှာလာတက်ရင်းနဲ့ ကြုံလာရတဲ့ အခက်အခဲတွေကြုံရတာကို သူ့ကိုယ်သူ မင်းသမီးတစ်ယောက်လို စိတ်မှတ်ပြီးတော့ အသက်ရှင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ဒီဝတ္ထုလေးကလည်း ဖတ်နေတဲ့သူတွေကို စာအုပ်ထဲရောက်သွားပြီး Sara ကို ကြည့်နေရသလိုကို ခံစားရစေမှာပါ။
(၃) The Call of The Wild
အမေရိကန်စာရေးဆရာကြီး Jack London ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ ဒီစာအုပ်က Buck အမည်ရှိတဲ့ ခွေးအကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးလေး Buck ကို လူတွေက ယုတ်မာပြီး နှိပ်စက်မှုတွေ၊ မနိုင်ဝန်ထမ်းခိုင်းပြီး နှင်းစီးစွပ်ဖားလှည်းအတင်းဆွဲခိုင်းတာတွေ၊ ဝံပုလွေတွေနဲ့ လူရိုင်းတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို စွဲနှစ်ဝင်အောင်ဖတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တချို့ကဆိုရင် အခုစာအုပ်က ကလေးငယ်တွေ ဖတ်ရှုဖို့ မသင့်လျော်ဘူးလို့တောင်ပြောကြားခဲ့ကြတာပါ။
(၄) The Great Gatsby
ဒီစာအုပ်ကတော့ ရုပ်ရှင်အနေနဲ့လည်း နာမည်ကြီးပြီးတော့ ဘယ်ကဘယ်လိုချမ်းသာလာမှန်း ဘယ်သူမှမသိတဲ့ မီလျှံနာသူဌေးကြီး Jay Gatsby နဲ့ ပြိုင်စံရှားအောင် လှပတဲ့ Daisy တို့ရဲ့ အချစ်ဇတ်လမ်းကို ပုံဖော်ထားတာပါ။ Gatsby ညတိုင်း မျှော်ကြည့်နေတဲ့တဖက်ကမ်းက မီးပြတိုက်ရဲ့ မီးစိမ်းလေးက ဘာဖြစ်မလဲ…
(၅) Pride and Prejudice
၁၈ ရာစုနှစ်ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jane Austen ရဲ့ ဒီစာအုပ်က အချစ်ဝတ္ထုတွေထဲမှာ အခုအချိန်အထိ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေဆဲ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ပါ။ ရုပ်ရှင်အနေနဲ့လည်း မကြာခဏကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးကြပြီး အဂိလိပ်တွေရဲ့ မတူညီတဲ့ ဂုဏ်အသိုင်းအဝိုင်း ၂ ခု ကြားက ကွာဟမှုတွေ၊ မှားယွင်းတဲ့ အစွဲတွေ၊ မာန နဲ့ အတ္တအားပြိုင်မှုတွေကို Jane Austen က အလှပဆုံးပုံဖော်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်လေးတွေကတော့ အရင်ဆုံး ဖတ်ကြည့်စေချင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ တကယ်လို့ တခြားစာအုပ်တွေကို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အခုနကပြောသွားတဲ့ အခမဲ့ရတဲ့ စာအုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စာအုပ်ကို Download ယူပြီး ဖတ်ရုံပဲနော်။
သင်ျကွနျမှာ ဖတျလို့ကောငျးတဲ့ အင်ျဂလိပျဝတ်ထုစာအုပျလေးတှေ
သင်ျကွနျပိတျရကျမှာ အိမျတှငျးအောငျးနတေဲ့သူတှရှေိကွသလား? အခုနောကျပိုငျးစာအုပျတှကေ ဌားရခကျလာသလို ဖုနျးနဲ့လညျး စာဖတျဖို့က ဘယျကနေ PDF File တှေ ရှာရမလဲဆိုပွီး အခကျကွုံလာပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ သင်ျကွနျလိုမြိုး နှဈတဈနှဈရဲ့ အကွာရှညျဆုံးအားလပျရကျဖွဈပမေယျ့လညျး စာမဖတျဖွဈပဲ အခြိနျကုနျသှားဦးမှာပါ။
အဲ့ဒီအတှကျ အခုလိုသင်ျကွနျတှငျးမှာ ကိုယျ့ဖုနျး Tablet တှနေဲ့ပဲ App အသုံးပွုပွီးတော့ အင်ျဂလိပျဝတ်ထုစာအုပျလေးတှေ ဖတျလို့ရအောငျ သုံးရမယျ့ App လေးနဲ့ စာအုပျအခြို့ကို ညှနျးပေးသှားပါမယျ။
အရငျဆုံး သုံးရမယျ့ App ကတော့ Aldiko Book Reader App ဖွဈပွီးတော့ iOS ရော၊ Android မှာပါ အခမဲ့ Download ရယူနိုငျတဲ့ Application တဈခုဖွဈပါတယျ။ အခု App ဟာ Apple iTunes Gift Card ၊ Google Play Store Gift Card တှေ Master ၊ Visa Card တှနေဲ့ ခြိတျထားရငျ စာအုပျတှကေို တရားဝငျဝယျဖတျလို့ ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုပွောသှားမယျ့စာအုပျတှကေတော့ Public Domain Books တှဖွေဈတဲ့အတှကျ အခမဲ့ရယူနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အရငျဆုံး App ကနေ Get Gooks (Feedbooks) ကနေ Public Domain Books ကို ရှေးခယျြပွီးတော့ အခုပွောသှားမယျ့ Ebooks တှကေို Download ရယူပွီး ဖတျရှုလို့ရပါတယျ။
အခုဝတ်ထုက လှနျခဲ့တဲ့ ၁၈၇၆ ခုနှဈက ဝတ်ထုစာအုပျတဈအုပျဖွဈပွီး စာရေးဆရာ Mark Twain ကရေးသားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ Sherlock Holmes လောကျတော့မဟုတျပမေယျ့ Tom Sawyer ဆိုတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျ ကွုံရတဲ့ အခကျအခဲတှေ၊ အမှုအခငျးတှကေို ဖွရှေငျးပုံတှကေ အခုစာအုပျကို နာမညျကွီးစခေဲ့ပွီး နောကျထပျ Tom Sawyer ပါဝငျတဲ့ စာအုပျ ၃ အုပျထပျမနညျးထပျပွီး ရေးခဲ့ရတဲ့အထိ နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ ဇတျကောငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
Sara Crewe အမညျရှိတဲ့ကလေးမလေးက လနျဒနျမွို့ကွီးမှာရှိတဲ့ ဘျောဒါကြောငျးတဈခုမှာလာတကျရငျးနဲ့ ကွုံလာရတဲ့ အခကျအခဲတှကွေုံရတာကို သူ့ကိုယျသူ မငျးသမီးတဈယောကျလို စိတျမှတျပွီးတော့ အသကျရှငျဖို့ ကွိုးစားတဲ့ ဒီဝတ်ထုလေးကလညျး ဖတျနတေဲ့သူတှကေို စာအုပျထဲရောကျသှားပွီး Sara ကို ကွညျ့နရေသလိုကို ခံစားရစမှောပါ။
အမရေိကနျစာရေးဆရာကွီး Jack London ရဲ့ အအောငျမွငျဆုံးစာအုပျတဈအုပျဖွဈတဲ့ ဒီစာအုပျက Buck အမညျရှိတဲ့ ခှေးအကွောငျးကို ရေးဖှဲ့ထားတာဖွဈပါတယျ။ ခှေးလေး Buck ကို လူတှကေ ယုတျမာပွီး နှိပျစကျမှုတှေ၊ မနိုငျဝနျထမျးခိုငျးပွီး နှငျးစီးစှပျဖားလှညျးအတငျးဆှဲခိုငျးတာတှေ၊ ဝံပုလှတှေနေဲ့ လူရိုငျးတှရေဲ့ တိုကျခိုကျမှုတှကေို စှဲနှဈဝငျအောငျဖတျရမှာဖွဈတဲ့အတှကျ တခြို့ကဆိုရငျ အခုစာအုပျက ကလေးငယျတှေ ဖတျရှုဖို့ မသငျ့လြျောဘူးလို့တောငျပွောကွားခဲ့ကွတာပါ။
ဒီစာအုပျကတော့ ရုပျရှငျအနနေဲ့လညျး နာမညျကွီးပွီးတော့ ဘယျကဘယျလိုခမျြးသာလာမှနျး ဘယျသူမှမသိတဲ့ မီလြှံနာသူဌေးကွီး Jay Gatsby နဲ့ ပွိုငျစံရှားအောငျ လှပတဲ့ Daisy တို့ရဲ့ အခဈြဇတျလမျးကို ပုံဖျောထားတာပါ။ Gatsby ညတိုငျး မြှျောကွညျ့နတေဲ့တဖကျကမျးက မီးပွတိုကျရဲ့ မီးစိမျးလေးက ဘာဖွဈမလဲ…
Transcend Myanmar အကှောငြး အသေးစိတစြုံစမြးရနြ
၁၈ ရာစုနှဈရဲ့ နာမညျအကွီးဆုံး အမြိုးသမီးစာရေးဆရာမတဈယောကျဖွဈတဲ့ Jane Austen ရဲ့ ဒီစာအုပျက အခဈြဝတ်ထုတှထေဲမှာ အခုအခြိနျအထိ အကောငျးဆုံးဖွဈနဆေဲ ဝတ်ထုတဈပုဒျပါ။ ရုပျရှငျအနနေဲ့လညျး မကွာခဏကို ပွနျလညျရိုကျကူးကွပွီး အဂိလိပျတှရေဲ့ မတူညီတဲ့ ဂုဏျအသိုငျးအဝိုငျး ၂ ခု ကွားက ကှာဟမှုတှေ၊ မှားယှငျးတဲ့ အစှဲတှေ၊ မာန နဲ့ အတ်တအားပွိုငျမှုတှကေို Jane Austen က အလှပဆုံးပုံဖျောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီစာအုပျလေးတှကေတော့ အရငျဆုံး ဖတျကွညျ့စခေငျြတဲ့ စာအုပျလေးတှဖွေဈပွီးတော့ တကယျလို့ တခွားစာအုပျတှကေို ဖတျခငျြတယျဆိုရငျလညျး အခုနကပွောသှားတဲ့ အခမဲ့ရတဲ့ စာအုပျတှအေမြားကွီးရှိသေးတော့ ကိုယျကွိုကျနှဈသကျတဲ့စာအုပျကို Download ယူပွီး ဖတျရုံပဲနျော။